ဂျောက်ဂျက် – Sample | Myanmar Mp3 Album
Home / 2008 / July / 24 / ဂျောက်ဂျက် – Sample
ဂျောက်ဂျက် – Sample
For my baby – ဂျောက်ဂျက်
အမှန်လေး – ဂျောက်ဂျက်
ပိုက်ဆံ – ဂျောက်ဂျက်
အဲဒါဘယ်လိုလုပ်မလဲ – ဂျောက်ဂျက် ရသ ကျော်ထွဋ်ဆွေ
ကြောက်လား – ဂျောက်ဂျက်
လေးစားမှုပျောက်ရှခြင်း – ဂျောက်ဂျက်
July 24, 2008 mmsong အခွေ (တကိုယ်တော်) ဂျောက်ဂျက် New Myanmar Albums Unreleased Albums 137 Comments
137 thoughts on “ဂျောက်ဂျက် – Sample”
ယဉ်ကျေးမှုနဲ့နှိုင်းလာရင်ဘာကိုမှကိုမပြောဘဲ အကုန်လုံးပယ်ချလိုက်ရုံဘဲလေ။ယဉ်ကျေးမှုနဲ့ကိုက်ညီနေတာသင့်လျော်တာ ခုခောတ်မှာကမရှိသလောက်ရှားပါးနေပြီမဟုတ်လားဗျာ။
မှန်ပါတယ်…. ဂျောက်ဂျက် ရဲ့သီချင်းတွေကြောင့် ဆဲတတ်သွားကြတာတွေရော၊ပိုဆိုးဝါးအတင့်ရဲကြတာတွေပါရှိမှာပါ။
ဆိုတာညင်းမရနိုင်ဘူးယူဆလိုပါ။။ခုတွေ့ နေရတာတွေ က ဂျောက်ဂျက်
ရိုင်းတာအကြောင်းပြုပြီး တစ်ပါးသူတွေ ကပါ သူ့ကိုလိုက်ရိုင်းပြနေကြတာပါ။
ဒီကိစ္စ ကိုတစ်ဦးတစ်ယောက်တင်မကဘဲ အားလုံးကိုကင်းရှင်းစေချင်ပါတယ်။
ခုလိုရိုင်းစိုင်းနေကြတာတွေ နေရာတိုင်းလူတိုင်းဆီမှာ ပပျောက် ဖို့ပြောနေရတာပါ။
မောင်နှမသားချင်းထက် ကို တစ်မျိုးသားလုံးအတွက်နာလို့၊စာနာနှမျောမိလို့ကိုပြောနေတာပါ။
ကိုယ့်အမြင်နဲ့ ကိုယ်ရေးကြတာပါပဲ……………….တစ်လောကလုံးကလူတွေ ..ကောင်တယ်……အကုန်သာလုပ်ကြ…အကုန်သာ ပြောကြ…………လုပ်ချင်ရာသာလုပ်ကြ……………….ဒါပေမယ့် ကျနော်ကိုတော့စောင့်ဦး…………..မှီအောင်လိုက်မလို့ပါ……….. :1 :3
ဦးဦးဂျောက်ဂျက်ရဲ့ တချင်းတွေကို တားတားကတော့ဒီလိုပဲညင်တယ်
တချင်းအမည် …………………………. သွားပုတ်လေလွှင့်
တေးရေး ………………………… ဆင်ကန်းတောတိုး
တေးဆို ………………………… လူလိမ္မာ့သားယဉ်ပါး .? ? ?
ပရိတ်သက်တွေကိုတော့ဒီလို ………… သူများယောင်လို့ယောင်
တားတားကတော့ …………………… မိကျောင်းမင်းရေခင်းပြ
ဒါကို Reply လုပ်တဲ့သူက …………….. အိုးမလုံအုံပွင့်
သခွပ်ပင်ကမီးတကျည်ကျည်လုပ်တယ်လို့မထင်စေချင်ပါ ရှေးထုံးလည်းမပယ်နဲ့ ဈေးသုံးလည်းမကြွယ်နဲ့ ဆိုသလိုပဲ ငါးခုပ်မတစ်ကောင်
ကြောင့်တစ်လှေလုံးပုက် ကုန်မှာဆိုးလို့ ရှဉ့်လဲလျှောက်သာပျားလဲစွဲသာ
လုပ်ကြပါလို့ …… ဒါပဲကွာ
မကြိုက်ရင်နားမထောင်နဲ့ပေါ့လဒရဲ့ 😈 😈 😈
ညီလေး ဂျောက်ဂျက်ရေ………..အမှန်တရားပြောလို့ ဆိုလို့ အမုန်းခံရတာ
ဘာမှမဆန်းပါဘူး………မုန်းစမ်းပါစေ ….လူငယ်ဆိုတာ အမှန်တရားကိုမြတ်နိုးတယ်……….မှန်တာကို ပြောရဲ ဆိုရဲရမယ်..
စာသားတွေ ကောင်းတယ် ……..အားပေးနေပါတယ်….
:7 :14 :14 :14 :14 :21 :22
ကိုဂျောက်ဂျက်သီချင်းတွေစောက်ရမ်းမိုက်တယ်……စာသားတွေအရမ်းကောင်းတယ် :25 လွတ်လွတ်လပ်လပ်ဆိုပါ :6 အမြဲတမ်းအားပေးနေမယ် :14
ပညာလေးတတ်တယ်ဆိုပြီး မှားနေတာကိုမှန်တယ်ထင်အောင်မပြောစမ်းပါနဲ့၊ အမှန်ကိုအမှန်အတိုင်းအမှားကိုအမှားအတိုင်းမြင်တတ်ကြစမ်းပါ။အမှန်ကိုမှားတင်ထင်အောင်၊မှားတာကိုမှန်တယ်ထင်အောင်
စကားပြောတက်စတူလေးကအိမ်မှာသီချင်းဆိုတော့” အဲဂျာဘူရေးရဲ ” တဲ့ ။
အနုပညာတခုဖန်တီမယ်ဆိုတိုင်း မင်းစဉ်းစား တာဝန်အများကြီးရှိတယ်………။
မြန်မာ Rap/Hiphop အဆိုတော်တွေ၊ ထောက်ခံသူတွေ အတွက် အရမ်းကို ဂုဏ်ယူပါတယ်
ကမ္ဘာမှာ မရှိသေးတဲ့ “မိန်းကလေးများ နားထောင်ရန်မသင့်” ဆိုတဲ့ ကဏ္ဍတစ်ခုဖွင့်လှစ်နိုင်တဲ့
အတွက်ဖြစ်ပါတယ် “ဒါမှ တို့မြန်မာကွ … သောက်ချဉ်တော့မဟုတ်ဘူး” ရှေ့လျှောက် ဒီ့ထက်
ပိုပြီး မိုက်ရိုင်းပြရမယ် … ကိုယ့်အမေ ကိုယ့်နှမ ကိုယ့်ညီမ ကိုယ့်ဒေါ်လေး ကိုယ့်အဖွား တွေကို
ဒါမျိုးသီချင်းတွေ များများဆိုပြပေးရမယ် … ဖြစ်နိုင်ရင် လက်တွေ့ပါလုပ်ပြကြရမယ် …
“ဒို့ မိမဆုံးမ ဖမဆုံးမ အောက်တန်းစားတွေရဲ့ခေတ်ကိုတော့ ရောက်ရမည်မှာမလွဲပါ”
Jock Jack ကအခု ဘ၀င်မြင့်နေတယ်…။(နဲနဲလေးအောင်မြင်တာနဲ့..။) ဂျာနယ်တွေမှာပြောထားတာစောက်ချိုး မပြေဘူး..။
စိုင်းစိုင်းရဲ့ album နဲ့ သူ့ရဲ album ကိုတစ်ရက်တည်းရောင်းမှာတဲ့…။ဘယ်သူကပိုရောင်းရလဲပြိုင်ချင်
လို့တဲ့..။ ပြီုင်ချင်ဆိုင်ချင်တဲ့စိတ်ကလူတိုင်းမှာရှိပါတယ်…။ဒါပေမဲ့အဲဒီလို ဂျာနယ်ထဲမှာထုတ်ပြောတော့ နဂိုကသူ့ကို ခင်နေတဲ့ လေးစားနေတဲ့စိတ်တောင် ပျောက်သွားပြီ..။ နောက်ဆုံးစကားလက်ဆောင်ပြောချင်တာတော့ ဘယ်လောက်ပဲတော်နေပါစေ…ဘ၀င်မြင့်တဲ့ကောင်ဆို
ပရိတ်သတ် က စောက်မြင်အရမ်းကတ် တတ်တယ်လို့..။ လမ်းမှာ Jock Jack နဲ့တွေ့ရင်လဲ ပြန်ပြောပြလိုက်ပါ…ကျွန်တော့်စကားတွေကို…။ ကျွန်တော်ပြောတာ စေတနာနဲ့ ပါ…လွန်သွားရင်တော့ sorry!
ကိုဂျောက်ဂျက်အနေနဲ့ မိန်းကလေးရောယောကျာင်္းလေးပါနားထောင်နိုင်မယ့် ယဉ်ကျေးတဲ့သီချင်းလေးတွေသာ rhyme လှလှလေးနဲ့ဖန်တီးမယ်ဆိုရင် ကိုဂျောက်ဂျက်ပရိသတ်တွေပိုမိုများပြားလာနိုင်ပါတယ် ၁၀တန်းအကြောင်းသီချင်းလေးကတော်တော်လေးနားထောင်လို့ကောင်းပါတယ်
အကြံပေးတာပါ… သူများကိုပုတ်ခတ်ပြောဆိုတာတော့မကောင်းပါဘူး မြန်မာအချင်းချင်းဒီဆိုဒ်လေးထဲမှာတစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် ရန်တွေဖြစ်နေတာမသင့်တော်ဘူးလို့ထင်ပါတယ် စိုင်းစိုင်းကလည်းသူပုံနဲ့သူ့ဟန် ကိုဂျောက်ဂျက်ကလည်းသူ့ပုံနဲ့သူ့ဟန်ပါပဲ…
မင်းကငယ်သေးတယ်ဆိုရင်ကလေးလို ပဲ တွေးအကောင်ဆုံးပဲ
ငသား အဲဟုတ်ပေါင် တားတားရဲ့🙁 🙁 🙁 🙁 🙁 🙁 🙁 🙁 🙁
အဲဒီလိုလူက ပိုဆိုးတယ် မိန်းကလေးတွေနဲ့ ပတ်သက်လာရင် မင်းအမှန်ကိုမြင်စမ်းပါ
:14 :14 :14 :14 :14 :14 :14 :14 :14 :14 :14 :14 :14 :14
Hiphop ဆိုတာ နဂိုကတည်းက ဟိုလူအပုတ်ချ ဒီလူအပုတ်ချတာကနေ စတာပဲ
မြန်မာပြည်မှာမှ မဟုတ်ဘူး … ဟိုး အနောက်မှာလဲ ဒီအတိုင်းပဲ မယုံရင် Eminem
ကိုယ်တိုင်ဝင်ရိုက်ထားတဲ့ ဇာတ်ကားတစ်ကားရှိတယ် ရှာပြီးတော့ ကြည့် ကြည့်ပါ
ဇာတ်ကားနာမည်တော့ မမှတ်မိတော့ဘူး … အဲဒီထဲမှာ သူတို့ Hiphop ပြိုင်ပွဲလုပ်
တော့ ပြိုင်တဲ့သူနှစ်ယောက်က စင်ပေါ်တက်ပြီး တစ်ယောက် တစ်လှည့်အပုတ်ချ
တာပဲ … မြန်မာလိုပြောရရင်တော့ အတင်း အုပ်တာပေါ့ သူများမကောင်းကြောင်းပေ့ါ
အဲဒီတော့ ခပ်လွယ်လွယ် ပြောရရင် Hiphop ဆိုတာ အတင်းအုပ်တဲ့၊ သူများမကောင်း
ကြောင်းပြောတဲ့ စာသားတွေကို တီးလုံးနောက်ခံ နဲ့ စကားကို ခလုပ်တိုက်မတတ်
ပြောတဲ့ သီချင်းပုံစံပေါ့ (သီချင်းလို့ပြောကြတာပဲ) … အရမ်းကို ခက်ခဲပါတယ်
တော်ရုံတန်ရုံနဲ့ Hiphop အဆိုတော်မဖြစ်နိုင်ပါဘူး … ဟဲဟဲဟဲ
အဲဒါကို ခင်ဗျားတို့က သူများမကောင်းကြောင်းမပြောပါနဲ့ တို့ မိုက်ရိုင်းတာတွေမဆို
ပါနဲ့တို့လုပ်နေသေးတယ် … အဲဒီလိုမှမလုပ်ရင် Hiphop မဟုတ်တော့ဘူးဗျ
Hiphop အဆိုတော်တွေကြည့်လိုက်ပါဦး … အဖြူ ဘယ်နှစ်ယောက်များရှိလဲလို့
လုံးဝ မရှိဘူးလို့မပြောဘူးနော် … အကုန်လုံးနီးပါးက အမဲတွေ … ကိုယ့်ဆရာတွေ
ပြောတာမှန်တယ် လမ်းပေါ်က အမှန်တရားဆိုတာလေ … စခဲ့တာကိုက အဲဒီ
လမ်းဘေးက အမဲတွေက စခဲ့တာပဲ … သူခိုးတို့ ဂျပိုးတို့ အပေအတေ ကောင်တွေ
ကိုယ့်ကိုကိုယ် Hiphop မှ hiphop ဆိုတဲ့ ဆရာသမားတွေကို တစ်ချက်လောက်
ပြောဦးမယ် … စိတ်မဆိုးနဲ့နော် …. တချို့တွေလဲ နိုင်ငံခြားမှာနေကြတဲ့သူတွေပဲ
American Idol တို့ … ဘာ Idol တို့ … ညာ Idol တို့ ကြည့်ဘူးကြမှာပေါ့နော် …
သီချင်းဆိုပြိုင်ပွဲပဲ ဆိုပါတော့ဗျာ …. မြန်မာပြည်က ဆိုကြမယ်ပျော်ကြမယ် အစီ
အစဉ်လိုမျိုးပါပဲ … Hiphop ဆိုပြီး ဝင်ပြိုင်တဲ့သူ ဘယ်နှစ်ယောက်ရှိလဲလေ့လာကြည့်
ပါဦး … သေချာတယ် ၁ ရာခိုင်နှုန်း (1%) တောင်မရှိဘူး … ကိုယ့်ကိုကိုယ် သိပ်မြောက်
မနေကြနဲ့လို့ … မင်းတို့ဘာသာ လမ်းပေါ်ကအမှန်တရားတို့ … လွတ်လပ်တဲ့ ရင်ထဲက
ဘာတို့ ညာတို့ လာလုပ်မနေနဲ့ … တကယ်ကြတော့ မင်းတို့ Hiphop ကသိပ်လူရာ
ဝင်တာမဟုတ်ဘူး … လမ်းဘေးမှာ လောက်သာ စွာကျယ်စွာကျယ်လုပ်လို့ရတာ
အဲဒီတော့ Hiphop ဆိုတာ
၁။ လမ်းဘေးက အပေအတေ တွေကစခဲ့တာ
၂၊ စာသားတွေက သူများတွေမကောင်းကြောင်း၊ ကိုယ်ကောင်းကြောင်း အတင်းအဖျင်းတွေ
၃။ လမ်းဘေးကကောင်တွေဆိုတဲ့ လမ်းပေါ်က အမှန်တရားဆိုမှတော့ မမိုက်ရိုင်းမှာမပူနဲ့
အဲဒီတော့ အဲဒီ့ hiphop ကို အားပေးပါတယ် ထောက်ခံပါတယ်ဆိုတဲ့ ဆရာသမားများကို
နားလည်လိုက်တာကတော့ အတင်းအဖျင်း နှင့် မိုက်ရိုင်းသော၊ အောက်တန်းစားဆန်သော
စကားများ စာသားများကို ကြိုက်တတ်သော သူတွေပါလား ဆိုတာပါပဲ … အဲဒီတော့
“ဒို့ မိမဆုံးမ ဖမဆုံးမ အောက်တန်းစားတွေရဲ့ ခေတ်ကိုတော့ ရောက်ရမည်မှာ မလွဲပါ”
Go on I accept joukjack I very like it.
I hate saisai.
အမှန် ဆိုတာ နေရာတိုင်းမှာ ရှိနေမှ ကောင်းတာကွ မိုက်ရိုင်းတာတွေ ဘာတွေ လာမပြောနဲ့ အောက်တန်းစားဆိုတာဘာလဲ မဟုတ်တာလုပ်ပြီး ဟုတ်တာလိုလို ဘာလိုလို ပုန်းလျှိုးကွယ်လျှိုးလုပ်နေသူကို အထက်တန်းစားလို့ပြောမှာလားကွ
ကျွန်တော်က MMA ပရိတ်သတ်ပါ တစ်ချို့ comment တွေကိုပေးမတင်သင့်ဘူးဗျ။ MMA ကိုထိခိုက်စေနိုင်တဲ့ နိုင်ငံရေးဆန်တဲ့ဟာတွေပေါ့။ :3
ကျွန်တော်တို့ဖက်က လစ်ဟင်းသွားတာပါ။ အဲ့လို နိုင်ငံရေးနဲ့နှီးနွယ်လာမယ့် ဘယ်ကွန်းမန့်မျိုးကုိုမဆို လုံးဝလက်မခံပါဘူးခင်ဗျာ။ နောက်ပုိုင်းသေချာစီစစ်သွားမှာပါ။ ခုလို သတိပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
MMA Crew တို့ရေ
ဘာအတွက် ကျနော့ Comment တစ်ခုကို ဖျက်ပြစ်ရတာလဲ …. ဖြစ်နိုင်ရင် အကြောင်းပြချက်
လေးသိပါရစေ … ကျနော့ Comment ထဲမှာ ဆဲတာမပါ ပါဘူးဗျာ … အဲ…ဒါပေမဲ့
ဂျောက်ဂျက်ထဲက စာသားတစ်ခုကိုတော့ ယူသုံးထားပါတယ် … အဲဒါပါလို့ ဖျက်တာဆိုရင်တော့
အဲဒီ ဂျောက်ဂျက် Album ကိုကော မဖျက်သင့်ဘူးလား … နောက်ပြီးတော့ ကျနော့် Comment
ကို ပြန်ပြီး Reply လုပ်ထားတဲ့ Comment မှာဆိုရင် “laီး ဖြစ်လား” ဆိုတဲ့ အသုံးအနှုံးပါတာတောင်
အဖျက်မခံရပါဘူး …. သိချင်ရုံသက်သက်ပါပဲ … ပြန်မဖြေဘူးလည်းရပါတယ် …နောက်တစ်ချက်
ကျနော် အားလို့ ဝေဘန်နေတာမဟုတ်ပါဘူး … မြန်မာပြည်ရဲ့ အဝေးမှာ IT အလုပ်နဲ့ အသက်မွေးနေတဲ့
သူတစ်ယောက်ပါ … တစ်ပါတ်မှာ ၆ ရက်အလုပ်လုပ်ရပါတယ် … သီချင်းတွေကို သံယောဇဉ် ရှိလို့
ဒီ Site ကို နေ့တိုင်းရောက်ဖြစ်နေတာပါ …. အမှား နဲ့ အမှန် ကိုခွဲခြားသိစေချင်လို့ … လူညီရင် “ဤ” ကို “ကျွဲ” လို့ဖတ်တဲ့ အဖြစ်မျိုးတွေ ဖြစ်လာမှာစိုးလို့ ဝင်ပြီးဝေဘန်ရေးလုပ်နေတာပါ …
ကျနော် ကိုယ်တိုင်သည်လည်း MMA ရဲ့ Contributer တစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ် … ဒါပါပဲ ဖြစ်နိုင်ရင်တော့ ဘာ့ကြောင့် ကျနော့် Comment ကိုဖျက်ရတာလဲဆိုတာ သိပါရစေ
ပညာမရှိတဲ့သူတွေပါ ၊ ဝဋ်ဆိုတာလည်ပါတယ်
MR .jauk jack
very good of u r sound
u try for hiphop world
ခင်ဗျားထောက်ပြထားတာကို လက်ခံပါတယ်….အပြုသဘောပါတဲ့ ဝေဖန်မှု ဖြစ်လို့ လူငယ်တွေ မှတ်သားသင့်ပါတယ်….
ကျေးဇူးတင်ပါတယ် uk fighter ရေ………..
အော်. အော်.. ဟုတ်ပါပြီ.. အားလုံးလဲ ဖတ်ပြီးပါပြီ.. နိုင်ငံခြားမှာနေသော
ခေတ်ပညာတတ်. Mr.ဗျိုင်း.. ဂျောက်ဂျက်က ရိုင်းတာလဲ ရိုင်းတာပေ့ါ..သူဆင်ခြင်ပါလိမ့်မယ်..
နောက်ပြီ..hip hop ကို မကြိုက်ရင်လဲ ဘာလို့.. နားထောင်နေသေးတာပါလဲ..???
ကိုယ့်ဟာကိုနေပါလား.. သိပ် မ foul နဲ့လေ.. အေးပေါ့.. နိုင်ငံခြားမှာနေတယ်ဆိုတော့..
ကိုယ့်တိုင်းပြည်မှာကို လာပြီး..အလုပ်ကျွေးပြုလိုက်ပါ.. အဝေးကြီးကနေ.. အဲလို တောပြောတောင်ပြော.. ဖောမနေနဲ့လေ…. ဒီက အကိုကြီးပြောတာတွေက. လွန်နေလို့ပြောတာပါ.. အကိုကြီး တင်ထားတဲ့..comment တွေကို တွေ့ပါတယ်.. နဲနဲ လွန်နေပါပြီ.. hip hop ကိုမကြိုက်ရင်.. အဲလိုမျိုး.အောက်တန်းစား..ဆိုတဲ့စကားလုံးတွေနဲ့.. မရိုင်းပါနဲ့..
ဆိုပါတော့..hip hop က အတင်းအဖျင်းဘဲ ဆိုပါဥိး.. အကိုကြီး rhyme လှအောင်လို့.. 8 ဘားလောက်ရွတ်ပြလိုက်ပါလား..ခုဟာက ရေးထားတာတွေက နားထောင်တဲ့ ပရိတ်သတ်ကိုစော်ကားရာကျပါတယ်.. ဂျောက်ဂျက်ရိုင်းတာ သူ့ဟာကို သူထိန်းသိမ်းပါလိမ့်မယ်..
အကိုက.. american idol တွေကြည့်တယ်ဆိုရင်လည်း. ဟုတ်ပါပြိလေ.Hip hop က သူ့အကန့်နဲ့သူနေ နေတာပါ.. အကို့ရဲ့ $$ ထမင်းအိုးတော့ တုတ်နဲ့ ထိုးမနေဘူးထင်ပါရဲ့..
ဂီတ တခုမှာ သူ့ဟာနဲ့ သူရှိပါတယ်. သူ့အကြိုက်ကို့အကြိုက် ဘယ်တူနိုင်ပါ့မလဲ.. ဟုတ်တယ်ဟုတ်..
အကိုကြိုက်တဲ့ ဂီတ ကို လဲ ဘယ်သူမှ ဘာမှ လာမပြောပါဘူး.အဲလိုဘဲ.. Hip hop ကိုမကြိုက်တာနဲ့
၀ါးလုံးသိမ်း မရိုင်းပါနဲ့.. မကောင်းပါဘူး..အသက်အရွယ်နဲ့လိုက်ပြီး. လူကြီးဆန်ပါလေ..အောက်တန်းစား.. လမ်းဘေးလူတန်းစား.. လမ်းဘေး.. အဲလိုတွေ ဘာလို့သုံးရတာပါလဲ.. အကိုက.. လူတွေကို ဘယ်ပေတံနဲ့ တိုင်းချင်တာပါလဲ.. မသိလို့မေးပါရစေ..
HIP HOP ကလူရာမ၀င်ဘူးဆိုတော့. အကိုမသိတာတွေလဲ ရှိပါသေးတယ်.. အကိုက.. HiP Hop သီချင်း အကုန်နားမထောင်ဘူးလို့ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်.. ပြောပြန်ရင်လဲ နိုင်ငံရေးတွေ ပါကုန်နေဦးမယ်..
Internet ထဲမှာ နဲနဲ ရှာလိုက်ပါဦး.. hip hop က မြန်မာပြည်မှာဘယ်လို. ကမ္ဘာမှာဘယ်လိုဆိုတာ.. အကိုရေးထားတဲ့.. comment ၃ ခုလုံးဖတ်ပြီးပါပြီ..
နောက်ပြီး.. အကိုက.. “ဒို့ မိမဆုံးမ ဖမဆုံးမ အောက်တန်းစားတွေရဲ့ ခေတ်ကိုတော့ ရောက်ရမည်မှာ မလွဲပါ” ရေးထားတာဆိုတော့..ဘယ်လို လူမျိုးက ယဉ်ကျေးလိမ်မာ သိမ်မွေ့တာပါလဲ ဆိုတာ ရှင်းပြခဲ့ပါဦး.. ဒီက အကို့ ရဲ့ comment ကို ဖတ်ပြီး. ပြန်ရေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်.. နဲနဲတော့စဉ်စားပြောပါ..အကိုရေးထားတာတွေက.. အားလုံးကိုစော်ကားရာကျပါတယ်.. ဒါမကောင်းပါဘူး..
နောက် hip hop ကိုမကြိုက်ရင်.. hip hop ခေါင်းစဉ်အောက်မှာရှိတာတွေကိုယောင်လို့တောင်လှည့်မကြည့်ပါနဲ့..
လူငယ်တွေ ကြိုးစားထားတာတွေကို အသိအမှတ်ပြုပေးရမှာပေါ့.. လမ်းမှားနေရင်တည့်ပေးရမယ်လေ..အကြိုးနဲ့အကြောင်း အဆိုးနဲ့အကောင်းရှင်းပြပေးရမှာပါ. ခုဟာက အကိုရေးထားတာတွေက.. စောင်းမြောင်းရွဲ့ချိတ်ရေးထားတာပါ.. လူကြီးဆန်ပါလေ..
အော်အော်.. နောက်တစ်ယောက်လာပြန်ပြီ.. အားလုံးကို ၀ါးလုံးသ်ိမ်း.ပြီး. စော်ကားနေတာဘဲ…
အော်.. ခေတ်ပညာတတ်တွေကိုး.. အခြေအနေမှန်တွေကိုသိအောင်လုပ်ပါဦး…
လမ်းကြောင်းမှားနေရင် မပြင်ပေးဘဲ.. ဒီလို ချောင်ပိတ်သွားအောင်မလုပ်သင့်ပါဘူး..လူကြီးမင်းတို့ရယ်…
hip hop ကိုမကြိုက်ရင်လဲ ကိုယ်ကြိုက်တဲ့musicကိုဘဲအားပေးလေ
ဘာမကောင်းဒါလာပြောနေဒါလဲ ဆိုကြမယ် မှာ hip hop songs မဆို ဒါ ဆိုကြမယ် မှာ DJ စက်မရှိလိုဟဲ့
အပေါ်က hip hop ဂီတမုန်းသူများရဲ့
မြန်မာပြည်ကို မြတ်နိုးရင် နိူင်ငံတကာ မသွားဘဲ ဒီမှာဘဲနေပေါ့ပ်
UUmyo chit twe yae
ကွန်းမန့်ဖျက်ခံရတာမဟုတ်ကြောင်း ကျွန်တော်မေးလ်ပုို့ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ ဖတ်ပေးပါဦး။
ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ် .. အဲဒါ ဟုတ်တယ် . ဟိဟိ..
ဘေးတီးပေးမှ .. ပွဲ က မြိုင်သွားမှာ ခစ်ခစ်
you guys should respect each other’s right of freedom of speech. admins should not abuse their status too. it seems like admins are in the pocket of jouk jack’s fans. I didn’t expect this type of behavior from from the small men with small minds running this blog. be fair and dont delete comments from users towards your posts recklessly. dont think you can abuse the rights of your site users cos you are an admin. admins here want to talk about free speech but to them their abusive power speak louder than words. I dont care even if guys are not allowing this post.
1) Ok abc, if you haveabig mind, you shouldn’t write anything on the another page if it isn’t concern with that post. Be have wide eye!!!
2) We only delete policy and offensive comments. May I know which comment of yours are deleted? If you are not foul, we won’t never delete yr comments unless it breaks our rules. I also don’t care if you like or hate Jouk Jack. We aren’t bias to Jouk Jack since we allow to post on this page over 130 comments so far.
3) After seeing some comments, we know we can’t allow anyone to fight each other here and we’ll be moderating more strictly that can even make closing comments at some post like this.